Kabary : hankalaza ny faha-10 taonany ny Fanasina Manjakaray | NewsMada
Kabary : hankalaza ny faha-10 taonany ny Fanasina Manjakaray
Anisan’ny rantsana zokiny indrindra eo anivon’ny Mpikabary Katolika (Mpikalo) ny ao amin’ny Ekara Kristy Mpanjaka Manjakaray. Hanamarika sy hankalaza ny faha-10 taonany ry zareo amin’ity taona 2016 ity. Anisan’ny hetsika hotanterahina amin’izany ny dia fibeazana, fiatahana masina, fanandratana ireo andia vaovao mahatratra 40 mianadahy eo ho eo, sns. Taorian’ny Sorona Masina omaly no nampahafantaran-dRafanomezantsoa Julien Joseph, filohan’ny rantsana Fanasina Manjakaray io vaovao io.
Nankalazaina omaly teny an-toerana rahateo ny « Andron’ny vona » (Fikambanana rehetra eo anivon’ny fiangonana) eo anivon’ny fiangonana Ekar Kristy Mpanjaka Manjakaray. Tazana teny an-toerana ny solontenan’ny distrikan’i Faravohitra.
Marihina fa mandia ny faha-10 taonany ihany koa ny Mpikalo ankehitriny. Ankoatra ny eto an-toerana, efa ahitana rantsan’ity fikambanana mampianatra kabary malagasy ity ihany koa ny any Frantsa. Ilay fananana tambatsoatoavina (Maha kristianina sy maha malagasy) no anisan’ny mampiavaka azy.